Buzzwords nke ahia si Mashable | Martech Zone
Ndị otu na Mashable etinyela ihe omuma a Bọchị 30 nke Azụmaahịa Buzzwords. Dị ka nwa okorobịa na-enweghị ike iguzo ahia na-ekwu, Ana m enwe ekele mgbe niile mgbe anyị lere anya nke ọma ahia BS. Aga m eme ihe n'eziokwu, ma kweta na echere m na ihe ọmụma a nwere ike jupụta na ya.
Okwu dị ka ahịa agile, infographic na gamification na-adịghị ahia buzzwords, ha bụ okwu nke onye ahịa ọ bụla kwesịrị ịghọta nke ọma. Nsogbu m nwekwaa nnukwu nsogbu bụ n'okwu a Laghachi na ulo oru mbo na-edepụtara dị ka a buzzword. ROI abụghị buzzword… ọ bụ nnukwu mkpa. Anyị na-aga n’ihu ịhụ ụlọ ọrụ na azụmaahịa ndị na-anaghị eleba anya nloghachi ha na akụnụba dara. Ma mgbe ROI ha dara, ọ na - egbu azụmahịa ha - ọ bụghị naanị ahịa ha.
Offọdụ n'ime okwu ndị ọzọ na-agba ume, mana ọ bụghị ihe ọjọọ. Okwu okwu snackable masịrị m… anyị na-ezo aka na minigraphics - infographics nke gbadoro anya na otu mpempe data karịa akụkọ ahụ dum. Agụụ snackable na-ada ụda ntakịrị ma tụọ aka na omume nke otu esi ere ha Atụmatụ bara uru na ndị KPI nwekwara ike ịbụ okwu ọnụ ma ha dị mkpa ka ndị ahịa na-elekwasị anya n'ozi ha ma na-atụle nsonaazụ.
Tags: Mgbasa ozi 360ahịa agilennukwu datapịagburugburu ahịacplcuratoromenala ebighịakwụ ụgwọ mgbasa ozinjikọ akagamificationuto nkereechicheahụmahụ miri emiinfographickpinwa afọ mgbasa ozip-ahiaROIihuenyo nke abụọegosiọdịnaya snackableazụmahịa azụmahịasolomommekọrịtachere onye ndumkparịta ụka abụọechiche bara urumalitere ịrịa
Jun 2, 2013 na 8:03 nke ụtụtụ
Hụrụ ndepụta gị n'anya, okwu ndị ahụ amachaghị m nke ọma, yabụ echere m na ọ bara uru ịghọtakwu ha.
Ndepụta mara mma ma na-atọ ụtọ Doug. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ikpe ọmụma maka iji opekata mpe n'ime nkebiokwu ndị a. Ọ na-echetara m egwuregwu ụlọ ọrụ nke 90s ikpeazụ a na-akpọ Buzzword Bingo. Zuru oke maka oku ịre ahịa ogologo oge ma ọ bụ nzukọ ụlọ ọrụ. Ụfọdụ nwere ike icheta. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-atọ m ụtọ mgbe m chere banyere ya. Ekwenyere m gị na ROI bụ ihe dị mkpa, mana enwere m enweghị mmasị 🙂